Ummanni Oromoo tarkaanfii jala-deemtoota diinaa irratti fudhatamaa jirutti gammade! | Biiftuubilisummaa
← Barattootni Oromoo Yunivaristii Jimmaa fi Adaamaa Toftaa adda addaa jijijjirudhaan Warraaqsa eegalan cimsanii itti fufaniiru!
Sochii Warraaqsa Ummta Aanaa Dandii Jabaate →
Ummanni Oromoo tarkaanfii jala-deemtoota diinaa irratti fudhatamaa jirutti gammade!
Posted on February 11, 2012	by biiftuubilisummaa
Tarkaanfii ajjeechaa Gurraandhala 7, 2012 nama lammii Chaayinaa, Lee King Shang jedhamu irratti fudhatameen wal qabatee mootummaan hidhataa ykn milishaa ganda Warshaa Simintoo Dangattee kan ta’e nama Birbissoo Dhaabaa jedhamu shakkiin hidhuu gabaasnee turre. Har’a (Gurr. 10, 2012) poolisiin N/Oromiiyaa, aanaa Ada’aa Bargaa nama kana poolisii federaalaatti dabarsee kenneera. Poolisiin Federaalaas obbo Birbissoo gara Finfinneetti fiduudhaan har’a galgala mana hidhaa Maa’ikalaawii galcheera. Kanumaan walqabatee har’uma galgala namootni lama kan yeroof maqaa fi eenyummaan isaanii adda hin bahamin ajjeechaa kanaan shakkamudhaan Waajjira poolisii aanaa Ada’aa Bargaatti hidhamuun dhagahamera. Kanumaan walqabatee ummanni naannoo Warshaa kanaa jiraatu tarkaanfiin kun “imimmaan keenya nuuf haqe waan ta’eef hojii jagnummaa dargaggoonni keenya fudhatan kanatti ni boonna!” jechuudhaan gammachuu isaanii fuulletti ibsachaa akka jiranis baruun danda’ameera.
Warshaan Simintoo Dangattee bara kana omisha Simintoo eegaluuf qophiirra kan jiru yoo ta’u, namni lammii Chaayina tarkaanfii ummanni irratti fudhateen ajjeefame kun Warshaa kana keessatti aksiyoona guddaa kan qabuu fi Warshicha keessatti immoo gaheen hojii isaa ogeessa ijaarsaa akka ture(Civil Engineering) SAGLIIn GarbaGurraachaa gabaaseera.
Karaa biraa Godina Iluu Abbaa Booraa, Aanaa Baddalleetti Shankooraan hektaara 15,000 irratti biqilee jiru gutummaan guututti ummanni naannoo ibiddaan barbadeessu gabaasun keenya ni yaadatama. Shankooraan guutummaan barbadaa’e kun qabeenyummaan isaa kan nama lammii Paakistaan, Abdulmajiid jedhamuu yoo ta’u, kan biqilfameefis/dhaabameefis achuma Baddalleetti ijaaramee omisha eegaluuf qophiirran kan jiru Warshaa Shukkaaraa AL-ABESH jedhamuuf meeshaa dheedhii (Raw material) ta’ee akka dhiyaatuf ture. Warshaan kun mootummaa waliinis ‘Joint Venture’ ta’uun barameera. Tarkaanfii kana kan fudhatan ummanni Naannawa Magaalaa Baddallee qe’ee teenyarratti dhumna malee lafa dhalootaa faranjidhaaf gadi dhiisnee hin godaannu jechuudhaan Ijjannoo isaanii akkuma cimsanitti jiraachuu SAGLIIn Wallaggaa gabaaseera.